Toekarena - Mitaky fihaonana amin’ny fanjakana ireo mpandraharaha
Nampiaka-peo ny sehatra tsy miankina mba hampiharan’ny fanjakana ny fepetra hiteraka fiaingana ara-toekarena.
Mitaraina ireo mpandraharaha
Misintona ny sain’ny mpitondra manoloana ny olana ara-toekarena diavin’ny Firenena ankehitriny ny vondron’ny mpandraharaha Malagasy. Miantso ny mpitondra araka izany izy ireo mba hihaona sy hiara-hidinika amin’ny sehatra tsy miankina mba hamahana haingana ny olana ara-toekarena misy ankehitriny. Naneho ny fahadisoam-panantenany koa izy ireo manoloana ny tsy fisokafana araka ny tokony ho izy ny lanitry Madagasikara ny 5 Martsa 2022.
« Mbola zotra an’habakabaka roa ihany no misokatra hatramin’ny faran’ny taona 2021 »,
araka ny nambaran’izy ireo.
Takian’izy ireo araka izany ny fisokafan’ireo kaompaniam-pitaterana hafa. Naneho ny heviny momba ny fitantanana misy eto amin’ny Firenena ihany koa ny sehatra tsy miankina. Notsindrin’izy ireo ny mahakasika ny fepetra « tsy araka ny tokony ho izy » napetraky ny Fitondram-panjakana izay manakana ny fiverenan’ny kaompaniam-pitaterana an’abakabaka eto amintsika, taorian’ireny fihibohana sy kirizy manoloana ny valan’aretina Covid-19 ireny.
Mametraka fanontaniana araka izany ireto mpandraharaha ireto hoe « ny fanaingana ara’toekarena tokoa ve no laharaham-pahamehana ho an’ny mpitondra fanjakana sa zavatra hafa ? »
Naneho ny ahiahiny amin’ny mety ho fisian’ny fotoana maty na ny « saison morte » indray ireo mpisehatra amin’ny fizahantany raha toa ka tsy misy fivoarana izao toe-draharaha izao. Nilaza ny filohan’ny FHORM (Féderation des hoteliers et des restaurations de Madagascar), Johan Pless fa « zava-doza ho an’ny mpisehatra eo anivon’ny fizahan-tany izao zava-misy izao. Nilaza ny fanafoanana ny famandrihantoerana kosa indray ny avy ao amin’ny « Tour opérateur ».
Ankoatra ny sehatry ny fizahantany dia « misy fiantraikany amin’ny sehatra hafa ny tsy fahatanterahan’ny fisokafan’ny habakabaka ny 5 Martsa 2022 teo », araka ny nambaran’ny vondron’ny mpandraharaha.
Nilaza Hery Lanto Rakotoarisoa, filohan’ny GEFP fa « very tsena manodidina ny 600 tapitrisa dolara i Madagasikara. Tsena ao anatin’ny AGOA izay tokony ho azontsika nohon’ny sazy mahazo an’i Ethiopie amin’izao ».
« Takiana ny fihaonana maika eo amin’ny mpitondra fanjakana sy ny mpandraharaha mba ahafahana mamaha ny olana ara-toekarena »,
hoy ny filohan’ny GEM (Groupements des entreprise de Madagascar), Thierry Rajaona.
Ankoatra izay dia namatsiahy ny filohan’ny CTM (Confédération du tourisme de Madagascar), Aina Raveloson, fa « mamaritra ny 60% ny PIB izahay. Takiana aingana araka izany ny fanomezan-dalana ho an’ireo kaompaniam-pitaterana ara-barotra ».